Haddii aad rabto in aad barato sidii aad u wadaagaan geedka canabka ah videos in si gaar ah ama iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada, waxa muhiim ah in aad isla markiiba u akhri maqaalkan. Waxaan isku dayi doonaa in ay ku siiyaan qaar ka mid ah talooyin ku saabsan sida loo wadaagayo canabka videos adigoo isticmaalaya network warbaahinta bulshada jecel yahay ama si qarsoodi ah ugu dhaqsiyaha badan.
Part One: Sharing canabka Videos Iyada Social Media
Qaybta Labaad: Sida loo wadaag canabkiinna qarsoodi
Tani si fudud Waxaad samayn kartaa adigoo hubinaya in kaydka gaarka ah oo dhan ayaa la demin doonaa ka hor inta aadan xitaa ku dhameysan aad video bandhiga. Halkan tallaabo tallaabo account of waxa habboon in aad la si sameeyo si ay si guul leh u wadaagaan oo canabkiinna videos online by.
Tallaabada Koowaad: Ka dib markii aad video toogtay, app ku weydiin doonaa in aad haddii aad jeclaan lahayd in uu u wadaagaan online. Waxaad ka heli kartaa si ay u wadaagaan on canabka ama Twitter. The "Share On Twitter" Doorashadan waxaa lagu hubiyaa iyadoo default oo si toos ah u wargeeyaan karo oo qaybsada ku saabsan bulshada iyo shabakad.
Tallaabada Labaad: Ka dib markii uu ogolaaday in aan la qaybsano on network kasta oo warbaahinta bulshada, kaliya aad u leeyihiin in ay guji badhanka cagaarka leh "samayn" iyo video la soo saari doonaa oo la wadaago shabagga ku gaar ah bulshada in aad rabto.
Marka gujinaya "qabtay" canabka idin tusin icon koombiyuutarka. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaar ay diido in ay geliyaan. Marka ay tani dhacdo, inta badan waxay u tegi doonaa liiska sugitaanka oo aad iyo aad arki doonaa sugayaan sidii fariin ku qoran shaashada. Si taas looga qabto. Isku day inaad riix badhanka Upload mar kale marka ay taasi dhacdo.
Tani waa sida aad u wadaagtiin kartaa videos si cad iyada oo canabka. Waxaan rajeynayaa, in aad ku raaxaysan doonaa isticmaalaya codsiga xitaa ka badan hal mar aad ka heli a laalaadaan ah, aad doonaa hubaal rajeyneynaa in ka badan si joogta ah ka badan sidii hore u isticmaalaya.
Waxa kale oo aad fursad u haysataa in aan la qaybsano goobaha kale ee warbaahinta bulshada uga leexanina canabka ama Twitter. Waxa kale oo aad la wadaagi karaan Facebook. Si kastaba ha ahaatee, sida wakhti la bilaabay Doorashadan ayaa weli maqan.
Furaha wadaago canabkiinna si qarsoodi ah lagu hoos ayaa looga hadli doonaa. Waa hab fudud inaad marwalba u baahan doontaa in inta badan sameeyo, gaar ahaan haddii aad jeclaan wadaago videos si gaar ah. Halkan qaar ka mid ah tallaabooyinka aasaasiga ah ee ku saabsan sida loo wadaagi canabka videos si qarsoodi ah.
Tallaabada Koowaad: Ka dib markii aad video toogtay, guji soo socda. Marka aan sidaa yeelno, video, kaasaa badbaadi doona in aad camera oo duudduuban.
Tallaabada Labaad: Tan iyo video waa la badbaadiyey, fursadaha qaybsiga muuqan doonaa shaashadda. Waxaa laga yaabaa inaad uncheck fursadaha la wadaago. Tani waxay ka hortagi doonaa si cad loo wadaago.
Tallaabada Saddexaad: Ka dib markii unchecking fursadaha, guji "samayn".
Talaabada Afraad: Taas ka dib, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa habka fariimaha kale si aad ula wadaagto videos si gaar ah qof kale sida email ama dadka kale.
Kuwani waa uun qaar ka mid ah siyaabaha wax yar si aad u wadaagaan canabka videos si qarsoodi ah. Meelaha kale, waxaad ku samayn kartaa beddelin gaarka ah ee aad videos ah, laakiin hadda Doorashadan aan la heli karin canabkii. Tallaabooyinka soo sheegnay oo kaliya shaqo ku hareeraysan si aad u awoodaan in ay wadaagi videos si gaar ah.
Video qaybsiga waa mid ka mid ah habab badan oo aad u online xiriiraan. Sidaas awgeed, waa arrin la fahmi karo in aad rabto in aad barato sida loo wadaagi videos labada goobaha dadweynaha iyo kuwa gaarka ah. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, qodobkan waxaa loo abuuray in rajeynayaa in ay kaa caawiyaan arrimaha ku saabsan wadaaga ah videos aad abuuray iyada oo shabakaddan bulsho gaar ah.
Waxaad qaran si ka badan hadda inta badan ku raaxaysan doonaa adiga oo isticmaaleya isticmaale canabka ka badan sidii hore.
Top 10 Cinwaan Editor Tools for Your Video Faalladaada
> Resource > Video > Sida loo wadaag canabka Videos